ချောင်းဆိုးခြင်းကို အမှန်တစ်ကယ်ပျောက်ကင်းတဲ့ ဆေးနည်းကောင်း – Cele Lover
ချောင်းဆိုးခြင်းကို အမှန်တစ်ကယ်ပျောက်ကင်းတဲ့ ဆေးနည်းကောင်း
နေ့စဉ်..ရက်ဆက်ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်ဖြစ်နေတာ.ရက်၂၀ကျော်နေပီ။ဖြစ်ခါစတပါတ်လောက်အထိ..နေ့တိုင်း.ဆေးခန်းသွားပြတယ်။မသက်သာဘူး..လေပြွန်ရောင်တာနဲ့.ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်တွဲဖြစ်တော့..နေရဆိုး..ဆေးနည်းမိူးစုံ.ဝယ်သောက်။ဒါလဲ.မပြောက်ဘူး..ရက်၂၀ကျော်လာတော့.လူကြီးတွေက..စိုးရိမ်လာလို့.အထူးကုနဲ့.ပြတော့.ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူး.ဆိုပြီး.ဆေးရုံသွားဖို့..စီစဉ်နေတုန်း..အိမ်ကို.ရွာကဦးလေးအလည်ရောက်တာနဲ့ကြုံရောဦးလေးက.နေဦး ဆေးရုံမသွားသေးနဲ့ဦး သဘောင်္ရွက်ရေနွေးစိမ်သောက်ကြည့်စမ်းဆိုတာနဲ့ အာ့နေ့ တနေ့လုံးဝင်သလောက် သဘောင်္ရွက် ကို ရေနွေးစိမ်သောက်တာညကျ အိပ်နိုင်တယ်။
ဒါနဲ့ရောဂါ သက်သာတာပဲ ဆိုပြီးနောက်ရက်တွေ ဆက်တိုက်သောက်ပေးတာ ၅ရက်လောက်နေတော့ ချောင်းဆိုး ရင်ကျပ် လေပြွန်ရောင်တာ အရှင်းပြောက်သွားတယ်..။ဆေးနည်း သင်္ဘောအရွက်စိုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရွက်ခြောက်ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခွက်ထဲ ထည့် အပေါ်ကနေရေနွေးပူပူကို လောင်းထဲ့ပြီးမပူမအေးလေးမှာ သောက်လို့ရပီ သောက်ခါစမှာ.အရွက်စိမ်းစော် နံနေပေမဲ့ သုံးခွက်လောက် သောက်ပြီးသွားရင် အဆင်ပြေပြေသောက်နိုင်သွားပြီး…ငွေမကုန်ပဲ ရောဂါ သက်သာစေတဲ့ ဆေးနည်းမို့. ကျမနဲ့..ရောဂါတူသူများ..ရှိရင်.စမ်းသောက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်…..။
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို အမွန္တစ္ကယ္ေပ်ာက္ကင္းတဲ့ ေဆးနည္းေကာင္း
ေန႔စဥ္..ရက္ဆက္ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္ျဖစ္ေနတာ.ရက္၂၀ေက်ာ္ေနပီ။ျဖစ္ခါစတပါတ္ေလာက္အထိ..ေန႔တိုင္း.ေဆးခန္းသြားျပတယ္။မသက္သာဘူး..ေလႁပြန္ေရာင္တာနဲ႔.ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္တြဲျဖစ္ေတာ့..ေနရဆိုး..ေဆးနည္းမိူးစုံ.ဝယ္ေသာက္။ဒါလဲ.မေျပာက္ဘူး..ရက္၂၀ေက်ာ္လာေတာ့.လူႀကီးေတြက..စိုးရိမ္လာလို႔.အထူးကုနဲ႔.ျပေတာ့.ဒီတိုင္းမျဖစ္ဘူး.ဆိုၿပီး.ေဆး႐ုံသြားဖို႔..စီစဥ္ေနတုန္း..အိမ္ကို.႐ြာကဦးေလးအလည္ေရာက္တာနဲ႔ႀကဳံေရာဦးေလးက.ေနဦး ေဆး႐ုံမသြားေသးနဲ႔ဦး သေဘာရၤြက္ေရေႏြးစိမ္ေသာက္ၾကည့္စမ္းဆိုတာနဲ႔ အာ့ေန႔ တေန႔လုံးဝင္သေလာက္ သေဘာရၤြက္ ကို ေရေႏြးစိမ္ေသာက္တာညက် အိပ္ႏိုင္တယ္။
ဒါနဲ႔ေရာဂါ သက္သာတာပဲ ဆိုၿပီးေနာက္ရက္ေတြ ဆက္တိုက္ေသာက္ေပးတာ ၅ရက္ေလာက္ေနေတာ့ ေခ်ာင္းဆိုး ရင္က်ပ္ ေလႁပြန္ေရာင္တာ အရွင္းေျပာက္သြားတယ္..။ေဆးနည္း သေဘၤာအ႐ြက္စိုကိုပဲျဖစ္ျဖစ္အ႐ြက္ေျခာက္ကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခြက္ထဲ ထည့္ အေပၚကေနေရေႏြးပူပူကို ေလာင္းထဲ့ၿပီးမပူမေအးေလးမွာ ေသာက္လို႔ရပီ ေသာက္ခါစမွာ.အ႐ြက္စိမ္းေစာ္ နံေနေပမဲ့ သုံးခြက္ေလာက္ ေသာက္ၿပီးသြားရင္ အဆင္ေျပေျပေသာက္ႏိုင္သြားၿပီး…ေငြမကုန္ပဲ ေရာဂါ သက္သာေစတဲ့ ေဆးနည္းမို႔. က်မနဲ႔..ေရာဂါတူသူမ်ား..ရွိရင္.စမ္းေသာက္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္…..။
Previous Article အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် စိတ်ပင်ပန်းကြီးစွာ နေထိုင်နေရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့လက်ရှိအနေအထား ပုံရိပ်တစ်ချို့
Next Article ကျောက်ကပ်နှင့် ခါးနာခါးကိုက်၊ အူကျခြင်းတို့ကို ယူပစ်သလိုသက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ မုန်လာဥဖျော်ရည်